I-china Luxury imbuzi yezinwele ibhulashi lezimonyo elingu-15pcs elimnyama lesibambo sokhuni sebhulashi elibekiwe Umkhiqizi nomhlinzeki | UDongmei
Izinwele zebhulashi lezimonyo zebhulashi lezimonyo elingu-15pcs elimnyama lesibambo sokhuni sebhulashi
Isethi ye-15pcs yobungcweti bokwenza ibhulashi yenziwa ngoboya bezimbuzi, i-ferrule yethusi nesibambo sokhuni. Uboya bezimbuzi buthambile futhi bushelelezi, futhi bunamandla okubamba impuphu. Umklamo wesibambo osezingeni eliphakeme awusheleli, ubambelele ngokuqinile, futhi ngeke ukhathele ngemuva kokusebenzisa isikhathi eside. Inketho engcono kakhulu yabaculi bezimonyo!
- ISETHU SOBUHLE ESIPHELELE yamabhulashi we-makeup we-15pcs, konke okwethulwe kahle esikhwameni sesitayela sokwenza ibhulashi sokugcina amabhulashi akho uwasebenzise, ​​ekhaya noma lapho usohambweni.
- SOFT KANYE NO yokuthwebula fibre: Uboya bezimbuzi zikanokusho, obuthambile nobusilika ekuthinteni, izinwele eziminyene azichithi, kanti futhi zithambile futhi zine-hypoallergenic ukuze zivumelane nezinhlobo zesikhumba ezizwelayo.Izinwele zebhulashi ngalinye lezimonyo ziye zahlolwa kanzima futhi zahlolwa, sicela uzisebenzise ngokuzethemba.
- ISANDLA ESIPHAKAMILENgokhuni lwekhwalithi kanye ne-rose ferrule yegolide ngokuhlangana. Kukhanya futhi kunethezekile, noma ngabe usebenzisa amabhulashi isikhathi esingakanani, ngeke uzizwe ukhathele. Ukungasheleli, ukubamba okuqinile, ungasebenza kangcono ngamabhulashi ahlukahlukene wokukwenza, ukukunikeza umuzwa omuhle kakhulu womkhiqizo.
- ISIPHO ESIPHELELE:Awunakucabanga ukuthi le brashi yamakhemikhali esethiwe ithandwa kangakanani ngabesifazane. Noma ngabe unikezwe wena noma njengesipho kubangani bakho besifazane, kuzokwenza abantu bakhamuluke, bonke abesifazane abafisa ubuhle Kusifanele isipho esiyigugu kangako.
- I-Dongshen Makeup Brush ineminyaka engaphezu kwengu-30 yesipiliyoni esicebile futhi izibophezele ekunikezeni amakhasimende imikhiqizo esezingeni eliphakeme, Ukuthola ukuklama imikhiqizo emihle, ukuzwa kumakhasimende amaningi ajabule kwenza konke kube mnandi kakhulu!
Igama lomkhiqizo Uboya bezimbuzi obubizayo ibhulashi lezimonyo elingu-15pcs isibambo esimnyama sokhuni isethi yokwenza ibhulashi
Izinto zezinwele Izinwele zezimbuzi
Izinto Izinwele zezimbuzi + isibambo sokhuni + i-ferrule yethusi
Ukusetshenziswa kwebhulashi lokwakheka:
* I-Loose powder brush: Ibhulashi le-powder elibunjiwe linokuthungwa okungasile, futhi ubuso bezimonyo buhlanzekile futhi buhlala njalo.
* Ibhulashi le-Concealer: Inhloko enhle yebhulashi ingakwazi ukuxubha izindawo okunzima ukufinyelela kuzo, futhi umphumela wokufihla ufana kakhulu futhi ungokwemvelo.
* Ibhulashi le-Blush: Hlikihla okufiphele ngokugobeka kwemvelo, ukuxuba izithunzi, nokugqamisa kahle ukubukeka kobuso.
* Ibhulashi le-Eyeshadow: okuhlukahlukene. Kudingeka ulungiselele amabhulashi wethunzi losayizi ohlukile ukufanisa izindlela ezahlukahlukene zokwenza iso.
* Ibhulashi leshiya: Nge-ishiya le-powder, lingadweba umumo weshiya wemvelo. Kulula ukulawula ukuqina nomthunzi kunepensela yamashiya.
* Ibhulashi lezindebe: Chaza ngokunembile ukuma kwezindebe, yenza izindebe zigcwale futhi zifane kakhulu, futhi zihlale isikhathi eside.
* Ibhulashi leSisekelo: Isetshenziselwa ukufaka isisekelo samanzi, izidingo zamabhulashi nesisekelo samanzi ziphakeme kakhulu.
* Ibhulashi le-contour yobuso: Isici ukuthi ikhanda lebhulashi lingu-45 °, usayizi uyafana nebhulashi eli-blush, kanti ama-bristles ajiyile.
A: Imikhiqizo yethu eyinhloko amabhulashi ezimonyo, ukushefa noma ibhulashi lesilevu, amathuluzi okwenza izimonyo namathuluzi okushefa.
Langaphambilini Igolide le-aluminium isibambo sezinwele zokwenziwa ze-8pcs iseti yokwenza ibhulashi
Olandelayo: Izinwele zamadoda zansuku zonke zezinwele zezinwele ezimnyama zesibambo sentshebe
Amabhulashi wezinwele zezimbuzi
isethi yokwenza ibhulashi
Ibhulashi le-Dongshen elihoxisiwe i-Kabuki makeup brush ...
Dongshen ibhulashi ukwakheka usethe wholesale pink cute v ...
Dongshen kabuki ibhulashi nomkhiqizi wholesale na ...
Dongshen kabuki ibhulashi ifektri okuqinile vegan syn ...
Umkhiqizi we-Dongshen kabuki brashi ongenasihluku ...
Setha i-Makeup Brushes, Yenza amabhulashi, Ukushefa Setha, Ukugunda Izinwele, isethi yokwenza ibhulashi, Ithuluzi Brushes Brushes,